2012-04-08 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
kaspersky ​ထက် ​ဈေး​ကြီး​တဲ့ TrustPort USB Antivirus 2012 12.0.0.4860 ​ပါ
​အ​ခု ​တင်​ပေး​မယ့် TrustPort USB Antivirus 2012 ​က​တော့ online ​မှာ kaspersky ​ထက်​တောင် ​ဈေး​ကြီး​ပါ​သေး​တယ်. 1 PC ​ကို EUR 29.95 ​တောင် ​ပေး​ရ​ပါ​တယ်. ​ဈေး​က​တော့ ​တော်​တော်​ကြီး​တယ်. ​ကျွန်​တော် ​ရ​ရ​ခြင်း​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ. ​ကီး​ဖိုင်​ကို ​သီး​သန့်​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. software ​ကို​တော့ ​သူ့​မူ​ရင်း​ဆိုက်​က​နေ Direct link ​က​နေ​သာ Download ​လုပ်​လို့​ရ​အောင် Direct link ​ထည့်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. ​ဘာ​တွေ​ကောင်း​တယ်​ဆို​တာ​ကို​တော့ ​ကျွန်​တော် ​စမ်း​ပြီး​တော့​မှ ​သီး​သန့်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ဒီ​လောက် ​ဈေး​ကြီး​ပုံ​ပေါက်​ရင်​တော့ ​အား​သာ​ချက်​တွေ​တော့ ​တော်​တော်​များ​မယ်​ထင်​တယ်. . ​သ​င်္က​နြ်​တွင်း ​ရ​ဟန်း​ဝတ်​မ​လို့​ပါ​ပဲ. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​တောင်း​ဆို​ထား​တာ​တွေ ​အ​ရမ်း​များ​နေ​တဲ့​အ​တွက် ​ဝဘ်​ဆိုက်​ဖက်​ကို ​ဦး​စား​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ဒါ​က​လဲ ​ကု​သိုလ်​ပဲ​မို့​လို့ ​ဒီ​ဖက်​က ​အ​များ​က​ပေး​တဲ့ ​ကု​သိုလ်​ကို​ပဲ ​အ​စား​ထိုး​ပြီး ​ယူ​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ဒီ​နှစ်​လဲ ​သ​င်္က​နြ်​တွင်း ​အ​ပြင်​ဖက်​တောင် ​မ​ထွက်​ဖြစ်​ပါ​ဘူး. ​ကဲ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ​ဦး
Download Trustpost USB Antivirus 2012 software
Download Trustpost USB Antivirus 2012 serial number
PC auto shutdown 4.9 (latest version) ​ဖြစ်​ပါ​တယ်.
​ကဲ ​အ​ရင်​က​ဟာ​က download ​လုပ်​မ​ရ​တော့​ဘူး​ဆို​လို့ ​အ​သစ်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို auto shutdown ​လုပ်​ချင်​တာ၊ auto turn on ​လုပ်​ချင်​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက် ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အား​လုံး​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​အ​ထဲ​မှာ keygen ​ပါ ​ထည့်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. keygen ​သုံး​နည်း ​မ​သိ​သူ​များ ​ဆိုက်​ရဲ့ ​ညာ​ဖက်​ခြမ်း​မှာ ​သုံး​နည်း ​လေး​မျိုး ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. ​အဲ့​အ​ထဲ​က keygen ​ဖြင့် license version ​ဖြစ်​အောင်​လုပ်​နည်း​ကို download ​လုပ်​ပြီး​တော့ ​ကြည့်​လိုက်​ပါ.
HP Compaq 511 Drivers For window Operating system
Tuang Mung : ​အစ်​ကို​ရေ ​ကျွှန်​တော့​ကွန်​ပျူ​တာ HP Compaq 511 ​ရဲ့ driver ​လို​ချင်​လို့ ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦး​ဗျာ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် .
​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ. ​မူ​လ​လင့်​ကို​ပဲ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အောက်​မှာ ​ကို​တင်​ထား​တဲ့ window ​က ​ဘာ window ​အ​မျိုး​အ​စား​လဲ. 32 bit ​လား 64 bit ​လား ​ရွေး​ပြီး download ​လုပ်​လိုက်​ပါ.
kaspersky ​ထက် ​ဈေး​ကြီး​တဲ့ TrustPort USB Antivir...
PC auto shutdown 4.9 (latest version) ​ဖြစ်​ပါ​တယ်...